“यहाँका ८० प्रतिशत घरहरुमा मोटरबाटो पु¥याएका छौं । स्तोरन्नतीमा पनि काम गरेका छौं । चिलाङदी चापपानी अन्र्तगत बाटोमा चापपानी खण्डमा पिच समेत गरेका छौं । कतिपय ठाउँहरु ढलान गरेका छौं । सडक निर्माण तर्फ बगनासकाली ९ चापपानीले निकै फड्को मारेको छ । ”
पाल्पा । ३ वैषाख ।
पाल्पा जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिका वडा नं. ९ चापपानीका अध्यक्ष ठानेश्वर तिमिल्सिनाले चुनावमा गरेका प्रतिवद्धता अधिकांश पुरा गरेको बताउनुभएको छ । तिमिल्सिनाले गएको निर्वाचनमा जनतासंग गरेका वाचा र प्रतिवद्धताहरु ८५ प्रतिशत पुरा गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा बगनासकाली वडा नं. ९ चापपानीबाट वडा अध्यक्ष निर्वाचित तिमिल्सिनाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विकास निर्माण, विद्युत, खानेपानी, संचार, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि सम्बन्धी अधिंकाश कार्यहरु पुरा गरेको बताउदै, तत्कालिन समयमा बोलेका केही कामहरु अझै गर्न वाँकी रहेको बताउनुभयो । “बगनासकाली ९ चापपानी यस्तो वडा हो, जो सबै भन्दा पहिला र समयमै कार्यसम्पादन गर्न सकेका कारण ३ पटकसम्म पुरस्कृत भएको थियो ।” अध्यक्ष ठानेश्वर तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘हामीले वडामा काम गर्दा जनताको मुहारमा हाँसो देख्ने गरी गरेका छौं, कुनैपनि समय भनेका छैनौ, दिनरात जनताकै सेवामा खटिएका कारण यो वडालाई नमुना बनाउन सकेका हौं ।’
तिमिल्सेनाका अनुसार चापपानीले यो ५ वर्षको अवधीमा शैक्षिक क्षेत्रमा फड्को मारेको छ । बगनासकाली गाउँपालिकामै एक मात्र प्राविधिक शिक्षालय चापपानीमा संचालन भएको छ । तिमिल्सेनाका अनुसार सिभिल इन्जिनियरिङ तर्फ संचालित प्राविधिक शिक्षालय बनाउन गाउँपालिका र वडा कार्यालयको महत्वपूर्ण योगदान छ । घोषणापत्रमै प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गछौं भन्ने उल्लेख गरेको चापपानीले वाचा पुरा गरेको छ । चन्द्र माविमा संचालित प्राविधिक विद्यालयबाट यो क्षेत्रका वालवालिकाहरु लाभान्वित भएका छन् ।
त्यस्तै यो वडाको स्वास्थ्य तर्फ पनि उल्लेख्य प्रगती भएको वडा कार्यालयको भनाई छ । तिमिल्सेनाले भन्नुभयो, ‘जनतालाई सर्भसुलव र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन्छौं भनेका थियौं पुरा गरेका छौं । ’ चापपानीमा घरगाउँबाट सर्वसुलव स्वास्थ्य, एम्बुलेन्स सहितको स्वास्थ्य सेवा, सबैभन्दा सस्तोमा एम्बुलेन्स सेवा दिएको छ । त्यस्तै चापपानी स्वास्थ्य चौकीलाई स्तोरन्नती गर्दै बेड, ल्याव सहितको स्वास्थ्यचौकी बनाएको छ । तिमिल्सेनाले भन्नुभयो ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य कामहरु गरेका छौं, केही अझै गर्न वाँकी छन् । क्रमश गर्दै गएका छौं ।’
चापपानीमा सडक यातायात तर्फ चिलाङदी–चापपानी–राम्दी मोटरबाटोले जोडेको अवस्था थियो । त्यस्तै चिलाङदी–बगनास हुँदै नायरचौपारी जाने गरी यी दुई बाटोको संजालले मात्र जोडेको अवस्था थियो । तिमिल्सेनाले भन्नुभयो, ‘हामी निर्वाचित भएर आएपछी साविकका ९ वडाहरुमा बाटो पु¥याएका छौं । सबै टोलमा बाटो पु¥याएका छौं, भएका बाटोलाई स्तोरन्नती गरिएको छ, कृषि उत्पादन बढाउन र बजारिकरणको लागि कृषकहरुको फाँटसम्म बाटो पुगेको छ । ’
यो पाँच वर्षको अवधीमा बगनासकाली ९ चापपानीले स्थानीय सबैका खेतहरुमा टयाक्टर र थ्रेसरहरु पु¥याउन सफल भएको छ । अध्यक्ष तिमिल्सेनाले भन्नुभयो, “यहाँका ८० प्रतिशत घरहरुमा मोटरबाटो पु¥याएका छौं । स्तोरन्नतीमा पनि काम गरेका छौं । चिलाङदी चापपानी अन्र्तगत बाटोमा चापपानी खण्डमा पिच समेत गरेका छौं । कतिपय ठाउँहरु ढलान गरेका छौं । सडक निर्माण तर्फ बगनासकाली ९ चापपानीले निकै फड्को मारेको छ । हामी मात्र होइन जनता संतुष्ट हुनेगरी काम गरेका छौं । ”
संचारको क्षेत्रमा बगनासकाली ९ चापपानीमा कार्यालय व्वस्थापन, सबै कामहरु कम्प्यूटर सिस्टममा, अनलाईन सिस्टमबाट कामहरु र पुराना कागजपत्रलाई डिजिटलाईज गरिएको वडा सचिव तिलक बुचाले जानकारी दिनुभयो । यहाँका सबै बस्ती र टोलहरुमा विद्युतको समस्या थियो । अहिले स्टीलका पोल र तारको व्यवस्थापन गरी विद्युतीकरण समस्या हल गरिएको उहाँको भनाई छ । चापपानीमा स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि खानेपानी तर्फ ३० प्रतिशत घरहरुमा मात्र स्वस्थ खानेपानी थियो । अहिले ९० प्रतिशत जनताको घरमा एक घर एक धारा सहितको स्वस्थ पिउने पानीको व्यवस्था गरिएको छ ।
“एक घर एक धाराको अभियाननै चलायर काम गरेका छौं, यहाँको सबैभन्दा पानीलाई दुःख भएको बगनास डाडामा समेत १ किलोमिटर पाइप फेरर करिव करिव समस्या समाधान गरेका छौं । पुराना पाइप फेर्ने र मुल संरक्षणका कामहरु अझै गर्न वाँकी छ ।” वडा अध्यक्ष ठानेश्वर तिमिल्सेनाले भन्नुभयो ।
५ वर्षे कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले सेवा ठान्यो भने र जनताको हितमा काम गर्छु भन्ने प्रण गर्ने हो भने जनताको आवश्यकता पुरा गर्न समय लाग्दैन भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ चापपानी । यहाँ २० वर्ष देखीको जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थालाइ ५ वर्षको कार्यकालले करिव करिव पुर्ति गरेको छ ।